Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza ny Tenin’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kachin Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Myama Norvezianina Nzema Oromo Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?
Matetika no ilazana hafatra iray na maromaro avy amin’Andriamanitra ny hoe “tenin’Andriamanitra.” (Lioka 11:28) Anaram-boninahitra kosa ny hoe “Ny Tenin’Andriamanitra” na “ny Teny” ao amin’ny andinin-teny vitsivitsy.—Apokalypsy 19:13; Jaona 1:14.
Hafatra avy amin’Andriamanitra. Imbetsaka ny mpaminany no nilaza hoe tenin’Andriamanitra ny hafatra nampitain’izy ireo. Niteny, ohatra, i Jeremia hoe “tonga tamiko ny tenin’i Jehovah”, rehefa hanomboka hilaza ny faminaniany izy. (Jeremia 1:4, 11, 13; 2:1) Talohan’ny nilazan’i Samoela mpaminany tamin’i Saoly hoe nifidy azy ho mpanjaka Andriamanitra, dia niteny i Samoela hoe: “Ianao kosa mijanòna mba hilazako ny tenin’Andriamanitra.”—1 Samoela 9:27.
Anaram-boninahitra. Manondro an’i Jesosy Kristy tamin’izy anjely tany an-danitra sy tamin’izy olombelona teto an-tany koa ilay hoe “ny Teny” ao amin’ny Baiboly. Andao isika hijery porofo vitsivitsy manamarina izany:
Efa nisy ny Teny talohan’ny namoronana ny zavatra hafa rehetra. “Tany am-piandohana ny Teny. ... Niaraka tamin’Andriamanitra izy tany am-piandohana.” (Jaona 1:1, 2) I Jesosy no “lahimatoa amin’ny zavaboary rehetra. ... Nisy talohan’ny zavatra hafa rehetra koa izy.”—Kolosianina 1:13-15, 17.
Tonga teto an-tany ny Teny ary lasa olombelona. ‘Tonga nofo ny Teny, ary nonina teo amintsika.’ (Jaona 1:14) ‘Nafoin’i Kristy Jesosy ny zava-drehetra ary naka ny endriky ny mpanompo izy, ka nanjary nitovy tamin’ny olombelona.’—Filipianina 2:5-7.
Zanak’Andriamanitra ny Teny. Rehefa avy niteny ny apostoly Jaona hoe ‘tonga nofo ny Teny’, dia nilaza toy izao izy: “Hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny an’ny zanaka lahitokan’ny ray.” (Jaona 1:14) Nanoratra koa i Jaona hoe: “I Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra.”—1 Jaona 4:15.
Manana toetra mitovy amin’ny an’Andriamanitra ny Teny. “Ny Teny dia andriamanitra.” (Jaona 1:1) I Jesosy no ‘taratry ny voninahitr’Andriamanitra, ary mitovy tanteraka amin’ny an’Andriamanitra ny maha izy azy.’—Hebreo 1:2, 3.
Mpanjaka ny Teny. Milaza ny Baiboly hoe misy “diadema maro” eo amin’ny lohan’ny Tenin’Andriamanitra. (Apokalypsy 19:12, 13) Antsoina hoe “Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo” ny Teny. (Apokalypsy 19:16) Nantsoina koa hoe “Mpanjakan’izay manjaka sy Tompon’ny tompo” i Jesosy.—1 Timoty 6:14, 15.
Mpitondra tenin’Andriamanitra ny Teny. Ampiasain’Andriamanitra hampita ny hafatra sy tari-dalana avy aminy ilay manana anaram-boninahitra hoe “ny Teny.” Nilaza i Jesosy hoe nanao an’izany izy. Hoy izy: “Ny Ray izay naniraka ahy no nandidy ahy ny amin’izay holazaiko sy hoteneniko. ... Koa ny zavatra lazaiko àry, dia lazaiko araka ny nolazain’ny Ray tamiko.”—Jaona 12:49, 50.
Baiboly Jesosy Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly
Iza moa i Jehovah?
Andriamanitry ny firenena iray fotsiny ve izy, ohatra hoe an’ny Israelita?
Afaka mahatakatra izay lazain’ny Baiboly ianao.
Hizara Hizara Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?
ijwbq no. 119
Fanazavana ny Jaona 1:1: “Tany Am-piandohana ny Teny”
Manana Anarana ve Andriamanitra?